Ramangwana Harina Basa uye Harina Kuitika | Martech Zone
Paranoia maererano neramangwana rehungwaru hwekunyepedzera, marobhoti, uye otomatiki zvinofanirwa kumira. Yese maindasitiri nehunyanzvi shanduko munhoroondo yakavhura vanhu kusvika pamukana usinga gumi wekushandisa tarenda ravo uye nehunyanzvi. Haisi yekuti mamwe mabasa haatsakatika - hongu ivo vanoita. Asi iwo mabasa anotsiviwa nemamwe mabasa.
Sezvandinotarisa-tarisa muhofisi yangu nhasi uye ndichiongorora basa redu, zvese zvitsva! Ini ndinotarisa nekupa pane yedu AppleTV, isu tinoteerera kumimhanzi pane yedu Amazon Echo, isu takagadzira akawanda mafoni maapplication kune vatengi, isu tine infographic zvirongwa zvevatengi, vhiki ino takabatsira vaviri vakuru vatengi vane yakaoma yakaoma yekutsvaga nyaya, ini ndiri kutsikisa izvi pane zvemukati manejimendi sisitimu, uye isu tiri kusimudzira zvinyorwa kuburikidza nesocial media.
Icho chokwadi ndechekuti, handina kumbobvira ndarota kunyangwe makore gumi nemashanu apfuura kuti ndaizove neyangu yedhijitari yekushambadzira agency uye ndingave ndichibatsira vatengi kufamba mukushambadzira online Nzira inoenda kumberi haisi kuonda uye kuonda, iri kuvhura yakafara uye yakafara! Chikamu chega chega chemuchina chinogonesa nhanho nyowani yekushanduka uye hunyanzvi. Kunyange isu tichiita toni yezano uye rekugadzira basa revatengi vedu, rakawanda remazuva edu rinoshandiswa kufambisa data, kugadzira masisitimu, uye kuita. Kana isu tichikwanisa kudzora izvo zvinhu, tinogona kugadzira zvakanyanya.
Ini ndinotenda chinetso chedu, kunyanya muUnited States, ndechekuti tiri kudzidzisa nekugadzirira vadzidzi vedu mabasa ari kutsakatika. Tinoda sisitimu nyowani yekugadzirira mazera anotevera kurova pasi kumhanya pane aya matekinoroji matsva.
Hupenyu hweColonial hwakagadzira iyi infographic, 15 Mabasa Aive Asipo 30 Makore Ago. Sezvo iwe uchiongorora runyorwa rwemabasa uye nepakati mihoro, tarisa kuti mangani ari mune edhijitari midhiya!
Tags: mugadziri weappBloggermukuru wekuteererahupenyu hwekoloniDrone anoshandaramangwanainfographicnyanzvi yekuchengetedza ruzivomabasaseo nyanzvisocial media managermushandisi ruzivo dhizainivirtual mubatsirimuongorori wewebhu
Chekupedzisira, Inguva Yekutorera WWW Yako